अाफ्नाे बचाउ गर्न यसरी झुटा कुरा गरे बागचाैर नगरप्रमुखले, लेकाली अनलाइनले सबै प्रमाण दियाे !
साउन ३०, सल्यान ।
समय समयमा पत्रकार माथि विभिन्न आरोप लाग्ने गर्दछन् । केहि त भएका आरोप लाग्छन् भने केहि नभएका झुटा आरोप लाग्ने गर्दछन् । सामान्यतया बजारमा केहि व्यक्तीहरुले पत्रकार पैसामा बिके भनेर हल्ला गर्छन । केहि सत्य होलान्, केहि झुटा होलान् यी बजारको समान्य हल्लाहरुको समाचार बन्दैन् ।
तर यसरी नै पत्रकार माथि आरोप लगाएको सल्यानमा भर्खरै एउटा समाचार बन्यो । बागचौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकीले सल्यानका केहि पत्रकार पैसामा बिक्छन भन्ने समाचार साउन २८ गते हाम्रो लेकाली अनलाइनमा प्रकाशित भयो । नगरप्रमुखको उक्त भनाइले सल्यानको पत्रकारीता जगतमै आच पुग्यो ।
कसकाे ध्यान जाला राप्ती राजमार्गकाे सल्यान बागचाैरमा ? भन्ने शिर्षकको समाचारप्रति प्रश्न चिन्न उठाउदै नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकीले लेकाली अनलाइनमा फोन गरेका थिए । फोन संवादको क्रममा उनले भनेका थिए्– “ साच्चिकै भन्ने हो भने म के भन्छु भने मिडियाका साथिहरुलाई पैसा नदिदासम्म एउटा समाचार लेख्ने पैसा दिइसकेपछि अर्काे समाचार लेख्ने केहि पत्रकारहरु पनि छन सल्यानमा । जस्तै मैले केहि उदाहरण दिनु नपरोस् । केहि घटणक्रमहरु कस्ता छन् भने अघिल्लो दिन चाई यो.यो. भयो भन्ने भोलिपल्ट पैसाको मिलेमतोमा, म त्यो पनि पर्दाफास गरिदिनेवाल छु । केहि गर्नुपर्न भा छ ।”
सुन्नुहोस् यो अडियो रेकर्ड
यहि बिषयलाई लेकाली अनलाइनले समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि नगरप्रमुखका नजिकका व्यक्तीहरुले हामीलाई फोन मार्फत र म्यासेज मार्फत वेलावेलामा समाचार हटाउन र मिलाउन भनेका थिए । त्यस्तै नगरप्रमुखले फोनमा भनेको कुरालाई समाचार किन बनाएको भन्दै हामीलाई समाचार सच्याउन उनका नजिकका व्यक्तिहरुले भनेका थिए ।
तर हामीले नगरप्रमुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्तीले भनेका कुरा समाचार बन्छन्, उक्त समाचार सच्याउन र हटाउन मिल्दैन भनेका थियौँ । यी सबै प्रमाण पनि लेकाली अनलाइन सँग सुरक्षित छन् । हामी पत्रकारको मान मर्यादामा रहेर समाचार प्रकाशित गरेरै देखायौं ।
समाचारले देशव्यापी चर्चा पायो, नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानले पनि तत्काल बैठक बसालेर नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकी सँग कुनै पत्रकारले पैसा खाएको भए प्रमाण देखाउन भन्दै विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्याे ।
त्यस्तै उनले कुराकानी कै क्रममा पत्रकारलार्इ मात्रै नभएर सल्यानका अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि आरोप लगाएको कुरा समाचारमा प्रकाशित भएको थियो । उनले भनेका थिए्– “ मलाई के लाग्दैन् भने दशवटा स्थानीय तह मध्यको फिल्डमा गएर काम गर्ने भन्या लोकमान बुढाथोकी हो । मैले दाबाका साथ भन्छु अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्या जाँडमा छन्, छोट्टीमा छन्, भट्टीमा छन्, काठमाण्डौमा छन्, दाङमा छन्, खलंगामा छन् तर म स्थानीय तहको फिल्डमा छु । २४ घण्टा फिल्डमा छु ।”
तर बागचौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख बुढाथोकीले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै लेखेका छन्– “राजनीतिक र आर्थिक चलखेलमा पत्रकारहरूले समाचार लेख्नु के सही हो भनेर भन्या थे । तर फेरि झुटो समाचार आएछ, सल्यानका सबै पत्रकारलाई आफू जस्तै देखाउन अर्को समाचार !”
लेकाली अनलाइनमा प्रकाशित भएको समाचार सत्य हो भनेर माथिको अडियो रेकर्डले प्रमाणित गरिसकेको छ । यस समाचार झुटो हो भनेर उनले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
नगरप्रमुख बुढाथोकीले फेबुकमा थप लेखेका छन्– “ एउटा समाचार आएछ । बागचौर नगरपालिकाको फोहोर बारे ! कस्ले फोहोर प्याकेको रहेछ, सुन्न बित्तिकै बिहान म आफै गएर सफा गरे तर सफा भएको ३ दिन पछि यस्तो फोहोर भन्दै समाचार आयो । कसरी आयो त्यस्तो समाचार ? कस्ले लेख्न, किन लेख्न पठाउँछ ? ”
उनको यो भनाइलाइ हामीले समाचारकै माध्यामबाट यसअघि नै यसरी स्पष्टीकरण दिएका थियौँ । “साउन २५ गते राप्ती राजमार्गमा पर्ने बागचौर ठिनबाङ खोलाको सडकको अबस्था र सोहि ठाउँ नजिकै रहेको फोहोरको थुप्रो लागेको फोटोलाई हाम्रो लेकाली अनलाइनले प्रकाशित गरेको थियो । पटकपटक नगरपालिकाले सरसफाइ गर्दा पनि जनमानसले सडक छेउमा फोहोरको थुप्रो किन लगाउछन् होला भनेर जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले फोटो सार्वजनिक गरिएको थियो । अझ त्यसको ३ दिन अगाडी नै नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकी आफै गएर साउन २२ गते त्यही फोहोर हटाएका थिए । यसरी सडक छेउमै फोहोर फाल्ने कसको कमजोरी होला भने प्रश्न स्वरुप लेकाली अनलाइनमा फोटो फिचर प्रकाशित भएको थियो ।”
याे समाचार भित्र पनि पढ्नु हाेस् “सल्यानका पत्रकार पैसामा बिकेकाे देखेकाे छु, पर्दाफास गर्न तयार छु” : नगरप्रमुख बुढाथाेकी
यो समाचार कसैको नाम किटानी गरिएको थिएन् । अझ समाचार प्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा गएर उजुरी गर्न पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ । उसो त जनताका हरेक दुख पिडा पनि लेख्नै नपाउने हैन् ।
त्यस्तै उनले फेसबुकमै लेखेका छन्- “अस्ति भक्कर तेहि समूहका एक जनाले दिपसागर भण्डारी मार्फत पैसा चाहियो भनेर मलाई खबर गर्नुभयो । सुन्न बित्तिकै मलाई रिस उठिसकेको थ्यो । तुरुन्तै मैले उल्टो रियाक्सन दिए ।”
हेर्नुहाेस् नगरप्रमुख लाेकमान बुढाथाेकीका फेसबुक स्टाटस
तर यसरी उनकाे रिस उठ्याे भन्दैमा उनले पत्रकारमा माथि झुटाे अाराेप लगाउन मिल्दैन् । तेहि समूहका एक जना भनेर उनले लेखेका छन् । लेकाली अनलाइनकाे कुनैपनि व्यक्तिले दिपसागर भण्डारी सँग पैसाकाे बारेमा कुनै कुरा गरेकाे छैन् ।
यता बागचाैर नगरपालिकाका प्रेस संयाेजक समेत रहेका दिपसागर भण्डारीले लेकाली अनलाइनकाे कुनै व्यक्तीले अाफुसँग कुरा नगरेकाे तर रेडियाे तहल्काका स्टेसन म्यानेजरमाथि विना प्रसंगकाे झुटाे अाराेप लगाएका छन् । उनले पत्रकार महासंघ सल्यानकाे बैठकमा सल्यानका प्रत्यक रेडियाेलार्इ नगरपालिकाले सुचना तथा कार्यक्रमकाे लागी छुट्याएकाे एक लाख रुपैया रेडियाे तहल्काका स्टेसन म्यानेजर डिल्लीराज रावतले मागेकाे भनेर विना प्रसंगकाे हाँस्यास्पद कुरा गरेर नगरप्रमुखकाे भनार्इलाइ बचाउ गर्न खाेजेका थिए । तर पत्रकारकाे बैठकले यस्ता विना प्रसंगका हाँस्यास्पद कुरा नगर्न भन्दै नगरप्रमुखलार्इ अरु कुनै पत्रकारले समाचारकाे लागी पैसा मागेकाे भए प्रमाण ल्याउन चुनाैती दिएका छन् ।
त्यस्तै बैठकमा बाेल्ने अधिकांस पत्रकारहरुले अाफ्नाे व्यवसायी सँग विज्ञापनकाे विषयलार्इ जाेडेर विना प्रसंगकाे समाचारकाे विषयमा कुरा नगर्न दिपसागर भण्डारीलार्इ अाग्रह गरेका थिए । याे कुनै समाचारमा बार्गेनीङ्ग नभएर बनावटी कुरा भएकाे भन्दै उपस्थित पत्रकारहरुले नगरप्रमुलार्इ अरु कुनै प्रमाण ल्याउन अाग्रह गरेका छन् ।
तहल्काका स्टेसन म्यानेजर डिल्लीराज रावतलार्इ दिपसागर भण्डारीले विना प्रसंगकाे यस्ताे हाँस्यास्पद कुरा गरेपछि र हुँदै नभएकाे लेकाली अनलाइनकाे समुह भनेपछि रावतकाे यस्ताे लेख अाएकाे छ
पढ्नुहाेस् याे लेख
“सेर हो त्यो मेयर, त्यो सेर संग लड्ने को अर्को सेर पत्रकार जागेछ” भन्दा गर्व लाग्यो ?
प्रकाशित मिति : २०७५ साउन ३० गते बुधवार